QC Ukuze PCB OMhlangano - Shenzhen Wonderful Technology Co., Ltd
Izingxenye Ukulawula ikhwalithi
Ukuze uqiniseke ukuthi izingxenye okumele asetshenziswe kukhona izinga ezinhle, kunezizathu izinqubo eziningana ukuthi silandela:
1. Ekuhlaziyeni ezibukwayo zikagesi ukuhlolwa nqubo ihlanganisa:
* Impahla wahlola:
-Weighed futhi kuhlolelwe umonakalo
isimo -Taping iphakethe zihlolwe-dented njll
ifektri -Original uphawu vs. non-ifektri uphawu
* Imibhalo Shipping eliqinisekisiwe
-Izwe azalelwe kulo
-Purchase oda kanye yokuthengisa oda izinombolo umdlalo
* Umkhiqizi P / N, ubuningi, usuku ikhodi yokuqinisekisa, RoHS
* Ukuvikelwa umswakama isithiyo eqinisekisiwe (MSL) -vacuum uphawu kanye nomswakama inkomba nge esifakiwe (uqale)
* Imikhiqizo emaphaketheni (izithombe futhi babika)
* Umzimba wokugubha ukuhlolwa (mshini egqwalile, umbhalo eziphukile, ukuphrinta double, Uyinki izitembu, njll)
* Physical izimo ukuhlolwa (bands phambili, imihuzuko, aqhephukile imiphetho, njll)
* Noma yimuphi omunye semfene ezibukwayo ezitholakele
Uma ukusatshalaliswa kwethu ezibukwayo ukuhlolwa usuphothuliwe, imikhiqizo isidluliselwe elilandelayo-electronic izingxenye ubunjiniyela ukusatshalaliswa ukuhlolwa ukuze ibuyekezwe.
2. Engineering Izingxenye Ukuhlolwa
Onjiniyela bethu abanamakhono futhi aqeqeshiwe ukuthola izakhi ukuze iyohlolwa ezingeni ezincane ukuqinisekisa ukuvumelana kanye izinga. Noma yimuphi izingxenye umsolwa noma ukungafani ezitholakalayo ku ezibukwayo ukuhlolwa inqubo kuyofakazela ukuqinisekiswa noma ukuthenga ngamanani ehlisiwe ngokuthatha izibonelo zalokho umkhiqizo we indaba / izingxenye.
I ubunjiniyela zikagesi ukusatshalaliswa ukuhlolwa nqubo ihlanganisa:
* Buyekeza kuhlolwe ngamehlo okutholakele kanye namanothi
* Ukuthengwa yokuthengisa oda izinombolo eliqinisekisiwe
* Ukuqinisekisa amalebula (bar amakhodi)
* Abakhiqizi logo nosuku lwamakholi yokuqinisekisa
* Umswakama ukuzwela ezingeni (MSL) kanye nesimo RoHS
* Olubanzi wokugubha ukuhlolwa eside
* Buyekeza bese ukuqhathanisa nomkhiqizi ishidi
* Izithombe engeziwe kuthathwe futhi babika
* Solderibility Testing, amasampula ibhekane i esasizosheshisa 'ukuguga' inqubo ngaphambi kokuba lwahlolwa ukuze solderibility, ukucabangela imiphumela yokuguga engokwemvelo isitoreji ngaphambi board- obandayo; Ngaphezu Engineering Izingxenye Ukuhlolwa esinalo ezingeni eliphakeme ukuhlolwa ngaphansi isicelo amakhasimende.
X-Ray Ukuhlolwa for BGA LoMhlangano
Ukuhlolwa yethu izinhlelo ezenzakalelayo X ray bayakwazi ukuqaphelisisa ezihlukahlukene izici isiliphu wesifunda ibhodi ukukhiqiza efektri. Ukuhlolwa kwenziwa emva inqubo nokunamathisela ngomthofu ukuqapha yokulimala izinga nokunamathisela ngomthofu. imishini yethu bayakwazi 'ukubona' solder emalungeni ezingaphansi amaphakheji ezifana BGAs, CSPs futhi FLIP chips LAPHO emalungeni solder afihliwe. Lokhu kuvumela sikwazi ukuqinisekisa ukuthi inhlangano kwenziwa kwesokudla. I ukukhubazeka kanye neminye imininingwane ukutholwa uhlelo ukuhlolwa kungenziwa ngokushesha sikuhlaziye inqubo ashintshwe ukuze kuncishiswe zikhubazeke futhi zibe ngcono ikhwalithi imikhiqizo yokugcina. Ngaleyondlela kuzabe kungasi ngokweembalo kuphela amaphutha langempela itholiwe, kodwa inqubo angase ashintshwe ukuze kwehliswe amazinga iphutha phezu amabhodi oluzayo. Ukusebenzisa le mishini kusivumela ukuqinisekisa ukuthi amazinga aphezulu ayagcinwa emhlanganweni wethu.
Aoi ukuhlolwa ngoba SMT
Ngenxa eyinhloko yokuhlola amasu e PCB inhlangano, Aoi osebenza ku ukuhlolwa okusheshayo nenembile amaphutha noma ukukhubazeka okwenzeka PCB inhlangano inqubo ukuze high PCB yesifunda ungakwazi kuqinisekiswe nge kwakungekho sici ngemva kokushiya yabo umhlangano line. Aoi singasetshenziswa kokubili PCB angenalutho futhi PCB inhlangano. Lapha e-PCB emangalisayo, thina ikakhulu isicelo Aoi ukuzohlola SMT (Surface Mount Technology) umhlangano line futhi ukuhlolwa wesifunda amabhodi oluze, uphenyo ngendiza isetshenziswa esikhundleni.
Ngo PCB Omangalisayo, imishini Aoi is kuye ngokuthi ikhamera ephezulu definition, le mishini kungaba thatha izithombe PCB ebusweni ngosizo emithonjeni eminingi ukukhanya. Khona-ke, ukuqhathanisa zizokwenziwa phakathi athumba isithombe bese ibhodi imingcele ezibe okokufaka ku computer kusengaphambili ukuze umehluko, kwezinso noma amaphutha kungenziwa ngokucacile kuboniswa ukucutshungulwa isofthiwe okwakhelwe. Yonke inqubo ingaqashelwa ngasiphi yesibili.
Aoi kuyinto contributive nokusebenza kahle ngcono ngoba kubekwa SMT umhlangano line, ngemva nje ukugelelza. Njengoba nje ezinye izinkinga zihlolwe futhi ibikwe imishini Aoi, onjiniyela kungaba kweso ushintshe elihambisana imingcele emabangeni yangaphambili yokwakha izimoto eziningi ukuze imikhiqizo asele uzobe kahle ababebuthene.
Ukuphazamiseka kwekhono Aoi uzisibekele ngokuyinhloko beze nokunamathisela ngomthofu futhi izingxenye izigaba. Ngokuya nokunamathisela ngomthofu, ukukhubazeka kungaba isukela izifunda evulekile, solder amabhuloho, solder izikhindi, solder enganele solder ngokweqile. Uphiko ukukhubazeka zibandakanya waphakamisa phambili, ingxenye yezinyawo, misaligned noma izingxenye ukuzikhohlisa.